Dunida Ciyaaraha Oo Si Weyn Uga Naxday Geerida Haleeshay Kobe Bryant Oo Ka Mida Ahaa Bahda Kubada Kolayga Ee NBA. | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Ciyaaraha caalamiga ah ayaa war musiibo ah la kulamay kadib markii la xaqiijiyay in Halyeyga kubada kolayga ee NBA ee Kobe Bryant ayaa ku geeriyooday burbur soo gaadhay diyaarad helikobtar aheyd oo uu saarnaa,
Kobe Bryant ayaa dunida ka tagay isagoo 41 sanno jir ah waxaana warbaahinta caalamka qabsaday warka naxdinta leh ee ka soo baxay geeridiisa.
Sida ay sheegtay warbaahinta TMZ, xiddigii hore ee kooxda LA Lakers ayaa la safrayay seddex nin kale iyagoo diyaarad qaas ah qaatay, waxayna diyaarada ku burburtay deegaan Calabasas oo u dhow magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Mareykanka.
Waxaa la rumeysan yahay in shantii qof ee diyaarada saarnaa inay gabigoodba geeriyoodeen iyadoo aysan jirin cid ka badbaaday.
Shilkaan diyaaradeed ayaa dhacay subaxnimada Axada ee waqtiga Mareykanka, waxaana haatan socda baadhitaan.
Sida ay wararka sheegayaan, diyaarada helikobtarka ayaa noqotay kubad dab ah durbadiiba ay dhulka ku dhacday.
Waxa uu dunida kaga tagay xaaskiisa Vanessa iyo seddex gabdhood oo ay isku dhaleen kuwaasoo la aaminsan yahay inaysan diyaarada saarneyn.
Dunida isboortiga ayaa durbaba tacsi u direysa qoyska halyeeyga kubada kolayga iyo bahda uu ka baxay ee NBA.
Kooxaha kubbada cagta aduunka ayaa si naxdin leh uga falceliyay geerida ku timid Kobe Bryant waxaana hal mar baraha bulshada iyo warbaahinta caalamka qabsaday shilka diyaaradeed ee uu ku geeriyooday halyaygii NBA-da ee Kobe Bryant.
Kooxda Fc Bavaria Ayaa Guul Ka Gaadhay Kooxda Batalaale.